Sangana Misoro iyo imwe nzira kune Miswe, asi isina systemd | Linux Vakapindwa muropa
Sangana Misoro iyo imwe nzira kune Miswe, asi isina systemd
Zvirokwazvo wakambonzwa nezvekuparadzirwa kwemiswe, kana zvisiri, rega ndikuudze zvishoma, Miswe iri Linux distro iyo yakavakirwa paDebian uye chinoita kuti ive yakakosha ndechekuti inomanikidza kubatana kwese kunobuda kubva pairi kuenda kune Tor network saka sarudzo yakanaka kwazvo yekuchengetedza zvakavanzika. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezveMiswe ini ndinokusiira iwe chinongedzo kuchinyorwa chinotevera.
Zvakanaka, Misoro yakaberekwa mukupindura kuMiswe, uine maitiro akafanana neino, zvakanaka yakanangana nevanhu vanofarira chimiro chekudzora kwavo kuvanzika uye kusazivikanwa paInternet.
Misoro kugovera zvichibva paDevuan, inova forogo yeDebian sezvo ichishandisa systemd seiyo init system, zvichipa kupokana kwakakonzera vanogadzira kusarudza kutora systemd, ndizvo zvakakonzera kuberekwa kwaDevuan kunova kuve nekuparadzirwa kweDebian asi pasina systemd.
Tatsanangura zvishoma kumukira kunokonzereswa uye nemidzi yeMisoro, tinogona kunzwisisa kuti iyi imwe nzira yeMiswe iyo inosiya kushandiswa kwe systemd kusarudza System V.
Nokuda kwayo huzivi hwevanogadzira Misoro, zviri nyore kuti usashandise systemd, nekuda kwechikonzero chinotevera:
Iyo init yesarudzo haina systemd. systemd chidimbu chikuru che software iyo, nepo yemahara software, isina kuongororwa kuitira kuchengetedzeka kubvira payakatanga.
Kuve kwakakura sezvazviri, zvakaoma kuzviita uye nekufamba kwenguva zvinowedzera kuoma kuongorora systemd. Hatidi kureva kusaremekedza kana kupinda mukukakavadzana kuti sei systemd iri sarudzo yakaipa. Hatidi chete kuishandisa.
Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti misoro inongoshandisa mahara software, nepo Miswe ichienderera ichishandisa isiri-yemahara software. Isina-yemahara software haigone kuongororwa uye nekudaro haigone kuvimbisa kuchengetedzeka kana kusazivikanwa
1 Misoro 0.4
2 Dhawunirodha Misoro 0.4
Kugoverwa mazuva mashoma apfuura kwakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 0.4 iyo yainoshandisa nayo shanduko zhinji uye pamusoro pezvose inogadzirisa zvikanganiso zvakati wandei.
Pakati pekuchinja kukuru mu Misoro 0.4 ndeyekuti kushanda nesimba paDevuan SDK sezvo izvi zvinoshandiswa sehwaro hwekunyora kugovera.
Nayo izvozvi iyo distro inoshandura yayo yepasi vhezheni, ichienda kuDevuan Beowulf Kuyedza, (zvingave zvakaenzana naDebian Buster), iyo iyo kugovera kuri kuwana mapakeji azvino uno ezvekushandisa zvainoshandisa.
Kubva pamapakeji ekunyorera anopihwa neMisoro takawana maneja wefaira PCManFM, iyo Htop maitiro tarisisa, Electrum Bitcoin Wallet
Uyewo maturusi akasiyana siyana akatarisana nekutaurirana pamhepo, mukufamba takawana iyo Tor browser iyo inouya neNoScript neHTTPS Kwese kwese kuwedzerwa.
Iyo email mutengi Thunderbird inosunganidzwa neiyo Psi + XMPP mutengi uye HexChat IRC mutengi.
Kune iro gwaro padivi takawana Abiword uye Gnumeric uye iyo Evince gwaro rinoona. Mumisoro midhiya yekutamba inouya ne media player mpv uye mutambi weLXMusic odhiyo.
Iyo nyowani init system is sysvinit inosanganiswa neOpenRC. Iyi inzira yemazuva ano yeinit uye inoshanda yakagadzikana.
Tichifunga kugoverwa kwayakavakirwa pa Misoro haisanganisi graphical package maneja, kugovera kunoverenga iine APT yekuraira mutsara zvinoshandiswa kuwana, kuisa, kubvisa, uye kugadzirisa mapakeji. Nokusingaperi, APT yakagadzirirwa kudhonza software kubva kuDevuan repositories.
Dhawunirodha Misoro 0.4
Pasina imwezve ado, kana iwe wanga uchifarira kugoverwa kweLinux uye uchida kuiisa kuti udzidze zvakawanda nezvazvo kana iwe uchingoda kuyedza, unogona kuitora kubva chinotevera chinongedzo.
Ini pachangu, ndinogona kutaura kuti Misoro ndiyo yakanakisa sarudzo yekuyedza uye kune avo vanoda kuramba vasingazivikanwe pawebhu, vanogona kuishandisa nekuda kwehunyanzvi hwayo hwekusaisa chero yakavanzika software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Sangana Misoro iyo imwe nzira kune Miswe, asi isina systemd
"Isina-mahara software haigone kuongororwa uye nekudaro haigone kuvimbisa kuchengetedzeka kwayo kana kusazivikanwa"
Asununguka? Iye anofanira kunge aireva "akasununguka", kwete "akasununguka."
Korora 26: Yakanaka fashoni Fedora remix
Intel yasarudza kurega iyo Intel Graphics Kugadziridza Turu yeLinux